दिल्ली आज राजस्थानसँग खेल्दै, सन्दीप टिममा पर्लान् ? - विवेचना
दिल्ली आज राजस्थानसँग खेल्दै, सन्दीप टिममा पर्लान् ?
April 11, 2018 2,470 Views
काठमाडौं । दिल्ली डेयरडेभिल्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा आफ्नो दोस्रो खेलमा आज राति राजस्थान रोयल्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । नेपालका युवा खेलाडी सन्दीप लामिछाने टिममा पर्ने सम्भावना पनि छ ।
जितपुरस्थित सवाई मनसिंह रंगशालामा नेपाली समयअनुसार ८ बजेर १५ मिनेटमा सन्दीपको टिम दिल्लीले राजस्थानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । दुबै टिमले पहिलो खेलमा पराजयको शिकार बनेका छन् । आफ्नो पहिलो खेलमा किंग्स इलाभेन पञ्जाबसँग ६ विकेटले दिल्ली पराजित भएको थियो । यता, राजस्थान सनराइजर्स हैदराबादसँग ९ विकेटले पराजित भएको थियो ।
भेट्रान लेग स्पिनर अमित मिश्र पहिलो खेलमा महंगो सावित भए तर उनले एक विकेट पनि लिन सकेनन् । अमितले ४ ओभर बलिङ गर्दै ४६ रन खर्चेका थिए । पहिलो खेलमा फितलो बलिङ गरेका अमितको इकोनोमी ११.५० रहेको थियो ।
त्यसो त, विदेशी खेलाडीमा ट्रेन्ट बोल्ट, ड्यानियल क्रिस्टेयन र क्रिस मोरिसले पनि राम्रो बलिङ गर्न सकेका थिएनन् । यद्यपी ब्याटिङतर्फ मोरिसले १६ बलमा अविजित २७ रन बनाएका थिए । तर ओपनिङमा आएका विदेशी खेलाडी कोलिन मुनरो भने ४ रनमा नै आउट भएका थिए ।
पहिलो खेलमा दिल्लीका मुख्य खेलाडी ग्लेन म्याक्श्वेल थिएनन् । उनी अष्ट्रेलियन खेलाडी एरोन फिन्चको विवाहमा गएका कारण पहिलो खेलेनन् । आजको खेलमा भने उनीको उपस्थिति हुनेछ ।
दिल्लीका स्पिनरले किफायती बलिङ गर्न नसकेको अवस्थामा सन्दीपले खेल्ने सम्भावना रहेको छ ।
ग्लेन म्याक्श्वेल, क्रिस मोरिस, ड्यानियल क्रिस्टेयन, सन्दीप लामिछाने, जासन रोय, टे«न्ट बोल्ट, कोलिन मुनरो र लिआम प्लुंकेट गरी दिल्लीमा ८ जना विदेशी खेलाडी छन् । यी मध्ये ४ खेलाडीले आजको खेल खेल्न पाउनेछन् ।
Previous चलचित्र ‘भैरे’ नेपाल र अमेरिकामा एकसाथ प्रदर्शनमा आउने
Next मेची उद्योग वाणिज्य संघ देशकै उत्कृष्ट
Pingback: time release cat food dispenser
Pingback: den rozhdeniya2marta
Pingback: Prazdniki s 18 oktybrya po 14 maya
Pingback: free download m3
Pingback: Free team app
Pingback: pozdravlenie s dnem rozhdenija luchshej podruge
Pingback: match3games free download for windows
Pingback: mcat vs lsat
Pingback: freshamateurs610 abdu23na1337 abdu23na3
Pingback: southwest airlines
Pingback: prazdnici rossii
Pingback: online game of thrones season7episode 4
Pingback: placebo meds
Pingback: jubralee sports bra
Pingback: киш утопленник
Pingback: this is halloween
Pingback: гликоген у грибов
Pingback: era ameno traduzione
Pingback: Dal Colonialismo all'Imperialismo
Pingback: nezavisimyj spros
Pingback: banks in nigeria and their websites
Pingback: Resum tema 11 Resumen
Pingback: академик словарь
August 16, 2017 193,269